Ikhabhathi yokuphuma kwelanga, uKumkanikazi uCharlotte Isandi
Onahau Bay, Marlborough, New Zealand
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAllison And Daniel
2 recent guests complimented Allison And Daniel for outstanding hospitality.
Wamkelekile kwi-Sunrise cabin. Ikhabhinethi ijonge phezu kwe-Onahau Bay, i-Queen Charlotte Sound kwaye inemibono emihle yamanzi kunye netyholo lemveli.
Indlu ibekwe malunga ne-10m ukusuka endulini ukusuka kwindlu yethu. Inomnyango wayo wokungena, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elincinci.
Akukho ndlela yokufikelela kwi-Sunrise Cabin. Ungeza kwijethi yethu ngeteksi yamanzi esuka ePicton (imizuzu engama-20 uhambo oluthe ngqo), uhambe usuka kwiQueen Charlotte Track (imizuzu engama-20 enyuka umnqantsa, ayifanelekanga ebumnyameni), okanye uze nesikhephe sakho.
Ikhabhini ikwimo ezolileyo phakathi kwamatyholo omthonyama. Ungawuva umsinga ubhobhoza kufutshane. Ungaphumla kwaye uphumle, ukonwabele ukuqubha ukusuka elunxwemeni okanye kwijethi, sebenzisa iikayak zethu ezimbini kunye neejakethi zobomi ukuze ujonge iWaterfall Bay okanye iMistletoe Bay ekufutshane, uhambe imizuzu elishumi ukuya kwingxangxasi kunye nemisundululu ngasemva kwepropathi yethu okanye uthathe umkhondo wemizuzu engama-20 wokunyuka ngendlela Bush ukudibana neQueen Charlotte Track. Sihamba nge-2 1/2 iiyure ukusuka e-Anikiwa okanye i-1 1/4 iiyure ukusuka e-Mistletoe Bay (ikhofi kunye ne-icecreams ekhoyo xa ivenkile ivuliwe) kulo mzila. Unokuhamba uye eTe Mahia ukuze ufumane ikofu okanye i-icecream xa ivenkile ivuliwe, malunga neeyure eziyi-1 1/2.
Akukho venkile zikufutshane ngoko ke kufuneka uze nakho konke ukutya kwakho ngaphandle kwesidlo sakusasa selizwekazi esibonelela ngalo. Ikhitshi ekwikhabhathi inesinkbench, itoaster, iketile, imicrowave encinci, ifriji encinci kunye nebbq ene-burner eyahlukileyo yepani okanye i-frypan kwidekhi yekhabhinethi kunye netafile encinci yangaphandle kunye nezitulo ezibini. Ilinen yokulala kunye neetawuli zinikezelwa.
I-moring iyafumaneka ukuba uzisa isikhephe sakho. Siyi-20 min yokukhwela isikhephe ukusuka e-Picton okanye malunga neeyure ze-2 nge-kayak ngokuxhomekeke kwimozulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Allison And Daniel
Sihlala kwi-cottage kufuphi ne-cabin ngoko siya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye uncedo ukuba luyimfuneko.
UAllison And Daniel yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Onahau Bay